Abathakazalela Inguqu Bathi Bayayikholisa Imidlalo yeWorld Cup
Abasekeli bemidlalo yenguqu abeZimbabwe abeSouth Africa ukuzobukela imidlalo yenguqu yomhlaba bathi kabazisoli ngokusebenzisa imali yabo bethenga amatikiti okuyabukela imidlalo njengoba bephakathi kokukholisa abangasoke bakukhohlwe empilweni.
Njengobanje imidlalo kunguthaphutshiye inyama yembongolo, abadabuka eZimbabwe abathenge amatikiti ale imidlalo bathi kuyanambitha luluju. Inengi labababasekeli lithi emidlalweni esithe yadlalwa manje, bajajuliswe kakhulu ngowangeSonto lapho i-Germany ebhuqe khona i Australia 4 nya.
Kunjalo nje, iqembu le Dynamos yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo ye Premier Soccer League eyeviki yesithoba minwe mbili.
I Dynamos ithe ngokudla i Bantu Rovers ngeSonto yahle yaya phezu kwe Motor Action yona ethe ngokutshaywa nge 1 ka nya yi Douglas Warriors ngoMgqibelo yalahlekelwa yilesi sikhundla ebihlezi kuso kusukela imidlalo yalonyaka iqala.
Udaba luka Benedict Nhlapho loJoseph Njanji